Warbixin: Xiriir noocee ah ayaa ka dhaxeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Al Shabaab? | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Warbixin: Xiriir noocee ah ayaa ka dhaxeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Al Shabaab?
Warbixin: Xiriir noocee ah ayaa ka dhaxeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Al Shabaab?
Warbixin dhawaan soo shaac baxay oo lagu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay taageerto ururka ka dagaalama Soomaaliya ee Al-Shabaab ayaa loo gudbiyey hay’adda Qaramada Midoobay.
Guddi baaris oo hoos taga Qaramada Midoobay ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay u isticmaashay wax u muuqda madaafiic laga leeyahay Kuuriyada Woqooyi, weerar ka dhan ah xarunta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, horaantii sanadkan.
Ururka Al-shabaab ayaa lix weerar oo hoobiyeyaal ah ku qaaday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, intii u dhaxeysay Febraayo iyo May ee sanadkan.
Mid ka mid ah weeraradaas ayaa la sheegay in afar hoobiye lagu tuuray xarunta UN-ka ee kutaala gudaha garoonka Aadan Cadde 17-kii Febraayo, sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee guddiga Qaramada Midoobay.
“Laba madfac oo 60-mm ah oo aan qarxin ayaa laga helay weerarkii ka dib 17-kii Febraayo 2020. Mid wuxuu leeyahay astaamo u dhigma nooca 60-mm oo ah hoobiye ay soo saarto Jamhuuriyadda Kuuriya,” ayuu lagu yiri warbixinta guddiga.
Guddiga ayaa soo jeedisay in Waqooyiga Kuuriya laga yaabo inay ku lug leedahay heshiisyada hubka ee ururka al-Shabaab.
Warbixinta ayaa timid toddobaadyo kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay soo cusbooneysiisay diidmada ka dhanka ah argagixisada.
Bishii Juun, wasaaradda arrimaha dibedda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay ku fashilantay inay wax ka qabato taageerada falalka argagixisada caalamiga ah.
Mareykanka ayaa markii ugu horeysay u aqoonsaday Kuuriyada Woqooyi inay tahay dowlad taageerta argagaxisada sanadkii 1988, kadib duqeyntii ay u geysatay diyaaraddii Kuuriyada Koofureed oo ay ku dhinteen dhamaan 115 qof oo saarnaa.
Mareykanku waxuu liiska argigixisada ka saartay Pyongyang sanadkii 2008-dii, iyadoo lagu badalay horumarka laga gaaray wadahadallada hubka nukliyeerka. Balse sannadkii 2017-kii, ayuu Mareykanku mar kale ku eedeeyay Kuuriyada Woqooyi inay si cad u taageerto ficillada argagixisada.